Ukulula, ukuqikelela kunye nezitshixo ezisebenzayo zokubuyisela ukushukuma kwehlabathi ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Ukulula, ukuqikelela kunye nezitshixo ezisebenzayo zokubuyisela ukushukuma kwehlabathi ngoku
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Amanyathelo alula, aqikelelwayo nasebenzayo afunekayo ukuququzelela ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo ukunyuswa kohambo lwamazwe ngamazwe njengoko imida iphinda ivulwa.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) icele oorhulumente ukuba bathathe amanyathelo alula, aqikelelwayo kwaye asebenzayo ukuququzelela ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo ukunyuswa kohambo lwamazwe ngamazwe njengoko imida iphinda ivulwa.
Ngokukodwa, IATA Ubongoze oorhulumente ukuba bagxile kwiinkalo ezintathu eziphambili:
Iiprothokholi zezempilo ezenziwe lula
Izisombululo zedijithali zokuqhuba iziqinisekiso zempilo
Imilinganiselo ye-COVID-19 ehambelana namanqanaba omngcipheko ngenkqubo yophononongo oluqhubekayo
Umbono weshishini wokujongana nobunzima uchazwe kwiphepha lomgaqo-nkqubo elisandula kukhutshwa: Ukusukela kuQala ngokutsha ukuya ekuBuyiseni kwakhona: Isikhokelo soLula uHambo.
“Njengoko oorhulumente beseka iinkqubo zokuphinda bavule imida, ngokuhambelana noko bavumeleneyo kwiSibhengezo soMphathiswa ICAO INkomfa yeNqanaba eliPhezulu ye-COVID-19, iBlueprint iya kubanceda ngeendlela ezilungileyo kunye nengqwalasela ebonakalayo. Kwezi nyanga zizayo kufuneka sisuke ekuvulekeni kwemida yomntu ngamnye siye ekubuyiselweni kothungelwano lwezothutho lwezomoya lwehlabathi olunokuthi luqhagamshele uluntu luphinde luququzelele ukuhlaziyeka koqoqosho,” utshilo uConrad Clifford. IATAUSekela Mlawuli-Jikelele.
I-Blueprint ijolise ekuququzeleleni ngokufanelekileyo ukunyuswa koqhagamshelwano lwehlabathi. “Kufuneka sibe neenkqubo zokulawula ngokukhuselekileyo nangokusebenzayo ukunyuswa kohambo lwamazwe ngamazwe njengoko imida iphinda ivulwa. Ngaphezulu kweenyanga ezili-18 zamava okusebenza kobhubhane kunye nengxelo yabahambi siyazi ukuba ukugxila kwelaser kubulula, ukuqikelela kunye nokusebenza kubalulekile. Akunjalo namhlanje. Ngaphezulu kwe-100,000 yamanyathelo anxulumene ne-COVID-19 aphunyezwe ngoorhulumente kwihlabathi liphela. Obu bunzima bungumqobo wokushukumiseka kwehlabathi okwenziwa mandundu kukungangqinelani okwenziwe ngala manyathelo phakathi kwamazwe, utshilo uClifford.
Iiprothokholi zezempilo ezenziwe lula: Injongo mayibe ziiprothokholi ezilula, ezingaguqukiyo, nezinokuqikelelwa kwangaphambili.
Iingcebiso eziphambili zibandakanya:
Susa yonke imiqobo yokuhamba (kubandakanywa ukuvalelwa kunye novavanyo) kwabo bagonywe ngokupheleleyo ngesitofu esivunywe yi-WHO.
Vumela uhambo olungena-quarantine-free kubahambi abangagonywanga kunye nesiphumo esibi saphambi kokuhamba se-antigen.
Ezi ngcebiso zixhaswa luphando lwezimvo zoluntu lwabahambi oluye lwatyhila ukuba:
I-80% ikholelwa ukuba abantu abagonyiweyo kufuneka bakwazi ukuhamba ngokukhululekileyo
I-81% ikholelwa ukuba uvavanyo phambi kokuhamba luyindlela eyamkelekileyo yogonyo
Ama-73% akholelwa ukuba ukuvalelwa akuyomfuneko kubahambi abagonyiweyo